Labo Been Abuur Waaweyn Oo Todobaadkan Muqdisho Gilgiley Kadibna Faafay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Todobaadkan waxaa Muqdisho gilgilay labo been abuur oo waaweyn, kuwaasoo markii dambe ku faafay gobollo kale oo ka mid ah dalka.
Beenta koowaad waxey dhacday sabtidii lasoo dhaafay ee bisha Janaayo aheyd 8, waxaa maalintaas la faafiyey in adeegga EVCPLUS ee lacagaha lagu kala xawilo, ayna bixiso shirkadda Isgaarsiinta HORMUUD la xirayo.
Maalintaas waxaa xarrumaha shirkadda HORMUUD ku jabay kumanaan macaamiil ah, kuwaasoo markii ay run u qaateen warka la faafiyey shirkadda ka dlbaday iney dollar cad ugu badesho lacagaha EVCPLUS-ka ah ee ugu jira mobile-da.
Dedaal xoog leh oo shirkaddu bixisay kadib waxaa lagu guuleystay in macaamiisha lagu qanciyo in wararka la faafiyey yihiin been abuur aan raad laheyn.
Kalsoonida shirkaddu ka heshay macaamiisha ayaa waxaa sabab u aheyd iyadoo toos lacagahooda oo dollar ah u siisay kumanaaankii qof ee safafka dhaadheer usoo galay, sidoo kale waxey shirkaddu isticmaashay warbaahinta iyo farriin qoraaleed si macaamiishu u qancaan.
Maalintii axadda dhamaan dadkii shakiga la geliyey oo dhan waxey si caadi u biaabeen adeegsiga adeegga EVCPLUS, waxaana halkaas ku jabay been abuurkii la sameeyey.
Shalay oo arbaco aheyd oo bisha Janaayo aheyd 12 waxaa la faafiyey inuu geeriyooday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka Turkiga ku booqanaya qoyskiisa.
Waxey noqotay arrin qaab kedis ah kusoo baxday, dad badan ayaa amakaag la jeejeestay, siyaabo kala duwan ayaana shacabku warkaas u qaateen, dad badan ayaa run u qaatay, qaar baddanna wey beensadeen.
Shalay galab waxaa shacabka la hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliya, Mustaf Dhuxulow, wasiirka amniga qaranka C/kariim Xuseen Guuleed, afhayeenka madaxtooyada Inj. Yariisow, waxey isku dayeen iney dadka wararkaas been abuurka ah ka qanciyaan, hase ahaatee dad qaar ayaa u qaatay in wax la qarinayo.
Isla shalay galab, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka kala hadlay Radio Muqdisho, wuxuuna cadeeyey inaan xitaa uusan qabin wax xanuun ah.
Been abuurka labaad ee todobaadkaan la sameeyey ayaa halkaas ku dhamaaday, waxaana dadkii shalay la jiha wareeriyey xalay jiifsadeen iyadoo laga tirtiyay wixii lagu shubay.
Lama oga dadka sameynaya been abuuka nuucaan ah iyo ujeedooyinka laga leeyahay, hase ahaatee mid kasta oo ka mid ah ayaa lahaa meel laga anbaqaadi karo.
Beenta laga faafiyey Adeega EVCPLUS ee Shirkadda HORMUUD waxaa ka horreeyey shirkadda oo xirtay adeega Mobile Internet kadib markii arrinkaas Alshabaab ku amreen, waxaana taas dad dan leh raacsiiyeen in sidoo kale la xirayo adeegga EVCPLUS.
Beenta laga sameeyey caafimaadka madaxweynaha waxaa ka horreeyey in amrkii uu dalka Turkiga aaday afhayeenka madaxtooyada Inj. Yariisow warbaaahint qaar u sheegay in madaxweynaha lagu sameynayo baaritaan caafimaad oo guud, taasoo loo badelya in xaaladiisa caafimaad liidato ama uu dhintay.
← Muqdisho: Madaafiic La Maqlay Iyo Maamulka Gobolka Banaadir Oo Yiri Waa Macmal → Mortar fire rains down on Mogadishu